Mpanamboatra plastika sy mpamatsy plastika - Factory Plastika China
Kitapo Sushi plastika azo sarahana amin'ny sarony
Na mikasa ny hanova ny boaty sushi plastika azo esorina ianao, na mila vokatra mety amin'ny vidiny ara-toekarena dia mividiana fitaovana elektrika an-tserasera amin'ny ekipan'i Chunkai's Team. Ny vokatray dia be fangatahana eo amin'ireo mpanjifa noho ny endrik'izy ireo toy ny fananganana matanjaka, fanoherana ny zavona, fanoherana ny harafesina ary androm-piainana lava kokoa. Miaraka amin'ny fanampian'ny matihanina dia manolotra ireto vokatra ireto izahay amin'ny habe isan-karazany arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa sarobidy. Ankoatr'izay, ny orinasanay dia manokana amin'ny famokarana boaty sushi matihanina, boaty sushi plastika azo ampiasaina.
Sprayer zavona tsara plastika miaraka amin'ny Overcap
Ny zavona manify dia manaparitaka moramora ny akora amin'ny faritra lehibe kokoa. Tsy toy ny mandraraka ny vokatra, rehefa mampiasa satroka mister, ireo zavatra ireo dia tsy mandena na mahavoky ny faritra, fa kosa mampihatra sosona manify an'ireo vokatra, izay miampy ireo akora toy ny famafazana volo sy fofona. Ny vola ampiharina dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny famafazana bebe kokoa. Raha ny resaka freshener-drivotra dia manamaivana mora kokoa ny rahona manify rehefa mijanona elaela kokoa amin'ny rivotra izy ary maivana ireo poti-javatra. Na dia mety tsara kokoa aza ny vovon-tsolika sasany amin'ny fampiasana sprayer, izay manaparitaka ny vokatra mihoatra ny sehatry ny fipoahana matevina, ny mpanadio varavarankely sy ny vokatra fanadiovana hazo dia matetika no tsara kokoa raha vao avy nopotsiran'ny zavona matevina.
Fitaovana fisaka antsy sotro fihinanana sotro
Ny sotro fihinan-jaza antsy sotro an-tsokosoko dia manamora ny fiainana eo amin'ny orinasa, fa tsy mila manasa forkara sy sotro ary antsy maro be izy ireo, fa afaka mangataka amin'ny cutomers fotsiny hanary ny cutlery rehefa vita ny sakafo. Manamora ny fiainana ihany koa ho an'ireo mpanjifa izay mampiantrano hetsika na fety misy vahiny marobe.
Kitapo fitahirizana vacuum mankany amin'ny mpamonjy habakabaka
Ny kitapo vacuum na kitapo faneriterena dia nanjary nalaza tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay satria maro ny olona no nanomboka nanery akanjo sy lamba hamonjy toerana.
Miasa amin'ny mpanadio banga, fonosy fotsiny. Mitahiry toerana fitahirizana, toerana 80% nihena
Ny zipper misy tombo-kase roa dia mitazona ny rivotra sy ny rano, clip azo ampiasaina ao anaty kitapo
Tsy misy bobongolo sy bobongolo, arovy ny fitafianao, lambam-pandriana, ondana, lamba firakotra
350ml tavoahangy Juice plastika miendrika U Fat
Ity tavoahangy jiro plastika miendrika U 350ml ity dia tena tsara tarehy, mety amin'ny ranom-boankazo sy zava-pisotro ary rano. sary famantarana amin'ny tavoahangy.
Kitapo lamba lafaoro plastika PE mangarahara
Ity Bag Transparent PE Zipper Clothes Bags ity dia vita amin'ny fitaovana PE vaovao, henjana matanjaka, fisehoana malama, mora soratana, tsara tarehy sy malala-tanana, azo soratana sy atao pirinty. porofo famehezana.
Tavoahangy vita amin'ny ronono mangatsiaka mangatsiaka
Ity tavoahangy PET Milina Mazava Chubby ity dia tena tsara tarehy, mety amin'ny dite ronono, zava-pisotro sy rano. Nampiasainy ny fitaovana PET, tsy misy BPA, mifanaraka amin'ny satrony porofo amin'ny halatra. Afaka ampanjifaina ny lokon'ny tavoahangy, koa ny marika na ny pirinty fanontana. ny tavoahangy.
Tavoahangy endrika misy endrika Conical ho an'ny Takeaway
Ity tavoahangy mamorona Conical Creative ity ho an'ny Takeaway dia tena tsara tarehy, mety amin'ny rano mineraly, zava-pisotro sy rano. Nampiasain'izy ireo ny PET PET, maimaim-poana ny BPA, nifanandrify tamin'ny takelaka porofon'ny halatra. Afaka ampanjifaina ny lokon'ny tavoahangy, koa ny marika na ny pirinty fanontana ny tavoahangy.
Kitapo fako mikatona ho azy
Ity harona fako aotom-baravarana Dot-break ity dia vita amin'ny fitaovana HDPE vaovao, henjana matanjaka, fisehoana malama, mora soratana, tsara tarehy ary mety ampiasaina. Ny Dot-break Famafana mihidy fehin-kibo dia afaka mitazona fako mavesatra miaraka amina famolavolana teboka.
Kaontenera fitoera plastika roa
Ity container fitoeran-tsakafo plastika roa ity dia malaza sy mivarotra mafana,
Manana tombony ambany izy io:
Ataovy madio hatrany ny sakafo: boaty fisakafoanana antoandro tsara hitazomana ny sakafo hohanina sy sakafo mora tohana.
Fiarovana: ny kaontenera sy ny sarom-bilany dia vita amin'ny fitaovana PP Safe-Free sy Food-grade Safe PP.
Azo ampiasaina indray ary maharitra: Ny fitoeran-javatra dia natao ho azo ampidirina ao anaty vata fampangatsiahana na kitapo fisakafoanana, miaraka amina fanamafisana sy rakotra tery amin'ny rivotra.
Microtrezer / freezer / fanasana lozoro azo antoka eo ambony fitoeran'entana: mahazaka ny mari-pana hatramin'ny -40 ° F ka hatramin'ny 320 ° F (Na -40 ° C ka hatramin'ny 160 ° C)
Kitapo tombo-kase ho an'ny mpanangona sakafo
Ity kitapo Vacuum Sealer ho an'ny Sakafo Sakafo ity dia malaza sy mivarotra mafana.
Fiarovana: BPA Maimaimpoana, Simmer ary Microwave azo antoka, Tsara ho an'ny Sous Vide Cooking
Iray ho an'ny rehetra: Natao hampiasaina amin'ny milina fanefena banga rehetra
Adidy mavesatra: Manakana ny oxygen sy ny hamandoana ireo fitaovana marobe amin'ny ply varotra ary manafoana ny fahamaizana sy ny tsy fahampian-drano
Toekarena: 2 fonosana 11 '' ny sakany, 50 metatra ny halavany. izay 100 metatra ny totaliny. Manamboatra ny halavan'ny kitapo anao.
Lany fitoeran-tsakafo fitahirizana plastika azo esorina
Ity fitoeran-tsakafo fitahirizana plastika azo ampiasaina ity dia malaza sy mivarotra mafana, na dia heverina ho ao anaty fonosana blister aza ny sakafo, ny zava-misy dia ny ankamaroan'ny vokatra mpanjifa dia afaka mahazo tombony amin'ny fonosana blister. Safidy tena tsara raha tianao ho hitan'ny mpanjifa ny vokatrao eo amin'ny talanton'ny magazay, ny fonosana blister dia azo amboarina mora foana miaraka amina karazana endri-javatra sy safidin'ny endrika hamaly ny filan'ny vokatrao. Ny fonosana blister dia manao asa goavana ihany koa amin'ny fitazonana ny vokatrao tsy ho voaro rehefa mora ny fidiran'ny mpanjifa. Diniho ireto tombontsoa manaraka ireto avy amin'ny fonosana blister.